Imibhikisho yaseHong Kong ithinta amazwe amaningi – Bayede News
Iziwombe ezenzeke eHong Kong zikhomba ukucija
Ababhikishi betholana phezulu namaphoyisa ezitaladini zaseHong Kong Isithombe: nguDale De La Rey
Iziwombe ezenzeke eHong Kong zikhomba ukucija kwemikhonto
Iyasha iHong Kong njengoba abantu bakhona beqhubeka nemibhikisho yokuphikisana noHulumeni. Njengamanje le mibhikisho eqale ngokuthula nesijike yanodlame isingenele enyangeni yesithathu iqhubeka kanti akubonakali iba nomkhawulo. Kungabe iqutshulwe yini?
Le mibhikisho iqale ngokuthula kwathi ngenyanga uNhlangulana yadonsa abantu abacela esigidini ukuzwakalisa ukuphikisana nomthetho ophakanyiswe ngoMbasa ovumela ukunikezela ngabasolwa ababhekene namacala kuHulumeni waseChina.
Lo mthetho uphakanyiswe emva kokuthi kubulawe owesifazane ngesihluku ngesikhathi evakashele eTaiwan nesoka lakhe beyogubha usuku lwezithandani iValentine’s Day. Isidumbu sakhe lo owesifazane satholakala ehlathini. Isoka nelibe selisolwa ekubulaweni kowesifazane labe selibalekela eHong Kong nokuyindawo engenasivumelwano sokunikezelana ngabasolwa neTaiwan. Kusolakala ukuthi ukwenze lokhu ukubalekela ukushushiswa.
Amakhulu ezinkulungwane zabantu angene emgwaqeni awuchitha lo mthetho, athi awuhoxiswe. Bakhala ngokuthi ubeka engcupheni ukuzimela kwezinkantolo zaseHong Kong ngokunjalo nalabo abaphikisana neBeijing. Ababhikishi bagcwale imigwaqo, abanye bangena ngodli ezindlini zeSishayamthetho bephula iminyango namawindi.
Emveni kwesikhathi kucacile kubaholi ukuthi ababhikishi abapheli amandla, babe sebekumisa ukuphasisa umthetho. Kodwa lokhu akuzange kuyimise imibhikisho, kunalokho ibe isiba nodlame, kushiswa izakhiwo zombuso, kwalimala amaphoyisa kanye nababhikishi.
Manje bafuna umholi waseHong Kong uCarrie Lam asule esikhundleni ngoba bethi usetshenziswa iBeijing. Kuthe kuqala uMandulo, uLam ube esewuhoxisa umthetho obangwayo.
UHulumeni waseChina, noqale ngokuthula khathi kuqubuka lolu thuthuva, ube usubagxeka ababhikishi ngodlame, uphinde uvikele namaphoyisa asebe ngaphansi kwenkulu ingcindezi ekubhekaneni kwawo nesimo. IChina isizwakalise ukubeseka futhi nobuholi buka Lam.
IHong Kong le ingesinye sezifunda ezizimele kodwa esilawulwa ngaphansi kombuso weChina ngokwesivumelwano i-One Country, Two Systems. ITaiwan nayo ingesinye salezi zifunda eziphethwe iChina.
Lesi sifunda ngaphambilini sabe singaphansi kweBritain. Kuthe ngowe-1997, iBritain ibe isiyibuyisela esandleni seChina. IHong Kong inemithetho eyehlukile kunaleyo yaseChina neholwa iqembu lamaKhomanisi, njengoba abantu bekwazi ukubuthana ngokukhululeka kanye nokuvikeleka kwelungelo lokukhuluma ngokukhululela. Iphinde ibe enye yezindawo ezimbalwa ezibungaza isigameko sokubulawa kwababhikishi eTianamen Square ngowe-1989.
Imibhikisho yaseHong Kong isikapakele ngaphandle kwemingcele yaseChina nalapho abantu emazweni afana ne-Australia, iBritain, i-USA, iCanada neFrance bebamba amarali okuzwelana nabantu baseHong Kong. Ngakolunye uhlangothi ikhona nemibhikisho yalabo abahambisana noHulumeni, neyenza kube nokubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwezinhlangothi zombili.
IBeijing isiwakhuze iphindelela amazwe angaphandle ukuthi ayeke ukugxambukela odabeni lwaseHong Kong emva kwezinkulumo ezenziwe abaholi nezizwakalisa ukweseka ababhikishi abathi balwela amalungelo abo.
Inxusa laleli lizwe e-United Kingdom uLiu Xiaoming unxuse osopolitiki baseBritain ukuthi bahloniphe iChina. Ubasole ngokuqhuba ingqondo yobukoloni ekuphawuleni kwabo odabeni lwaseHong Kong, ethi izinkulumo zabo zinobudedengu.
Uthe iBritain ayamukele ukuthi iHong Kong isibuyele ezweni layo. Kuleli sonto abaholi baseChina basole osopolitiki base-USA ngokwenza izinkulumo ezitusa udlame eHong Kong. Babanxuse ukuthi bayeke ukugxambukela ezindabeni zangaphakathi eHong Kong naseChina.
Akuqali ukuba nemibhikisho eHong Kong, kodwa iyaphela kungabanga nazinguquko.
Kulokhu kusazobonakala ukuthi iBeijing izogoba uphondo yini ibanike uguquko abalufunayo ababhikishi.